Sirba haaraa 2018. Tamsaasa Sagaleen
Category: Sirba haaraa 2018
20.02.2021 Shaktisar Comments
Faarfataan wangeelaa Ruwaandaa Kizitoo Mihigo yeroo tokkotti nama dandeetti addaa qabuufi ogeessa jedhamuun leellifamaa ture. Booda keessa ammoo biyyaa ganuun himatame. Dhiheenya kanas erga to'annaa jala oolfameen guyyoota sadiin booda mana hidhaa keessatti umurii 38tti du'uun himame. BBC'n tajaajila 'Great Lakes' waa'ee jireenya faarfataa kanaa qorate haala kanaan qindeesseera.
Haala uffannaafi jireenya isaatiin baayyeen akka faarfataa qofa osoo hintaane akka lubaatti isa ilaalu ture. Akkuma lubaattis nageenya biyyattiif lallabaa kan ture yoo ta'u, adeemsuma kanaan kan ka'eedha booda keessa mootummaa biyyattii waliin wal dhabdee keessa kan galche.
Jalqabarratti mootummaan simatamee ture. Qophiin konsartii faaruu isaas namoota waa'ee egeeree biyyattii hawwan kumaatanaan lakkaa'aman gammachiisa. Fled genocide which killed his father and some relatives in Sent to Europe to continue his musical study in Controversial song The Meaning of Death released in Sentenced to 10 years in for plotting against the government.
Pardoned by the president in Arrested for trying to leave the country illegally in Faarfataan ogummaa muuziqaa qindeessuu abbaa isaarraa barate kunis waaqeeffannaa Kaatolikii keessatti beekamaadha.
Bara osoo mucaa waggaa 12 tahe garuu abbaan isaa fi miseensoonni maatiisaa kan biraa ajjeechaa duguggaa sanyii gaggeeffameen jalaa du'an. Ajjeechaa biyyattiitti bara sana gaggeeffameen namonni kuma kan sanyii Tutsii fi Huttuu muraasni mankaraarsitoota warra Huttuutiin ajjeefamanii ture. Kizitoo gostisaa Tutsii ta'eefi haala sanaan baayyee miidhamee tures, ergaa faaruu isaa kan nageenya buusu taasifatee ture akkuma faarfannaa eegaleen.
Bara kan dhalatee Mihigo obbolaa isaa jaha keessaa ilma sadaffaa ture. Kan guddatees Kaaba biyyattii bakka Kibehoo jedhamuutti ture. Boodas wayita ajjeechaan gaggeeffamuutti biyyaa ollaa kan taatee Buruundiitti baqachuun miseensoota maatiisaa lubbuun hafan waliin walitti makame. Ergasiin booda ammoo sochiin riphee loltootaa gari caalaansaanii gosa Tutsii ta'aniifi kan pirezidaantii biyyatti ammaa Pool Kaagaameen ogganamu aangoo qabannaan gara biyyaatti deebii'e.
Karoorri isaa waraanatti makamuun ajjeestoota abbaa isaa haaloo bahuuf ture fiixaan hinbaaneef. Kanaafu osoo umurii waggaa 14 jiruu kaasee gama kennaasaa kan muziqaa itti cifate 'Karubanda Minor Seminary' shaakalu eegale. Muziiqaa qopheessuufi faarfachuun baayyee kennaa addaa qaba,'' jetti hiriyaansaa mana barnootaa Jeen de Sibomaanaa. Waggaa lammaaffaa itti shaakalu eegalatte ture, Kizito warra umuriin isa dura jiran caalee xabataa meeshaa muziiqaa mummee kan ta'e ture.
Booda ammoo dandeettiin isaa kunis pirezidaanti Kaagaameedhaamu beekamtii argachuun badhaasa carraa abranootaa ' Conservatoire de Paris' akka baratuuf kennameef ture.
Hojii muziiqaa isaa biyya Awurooppaatti eegalulleen gonkumaa biyyasaa Ruwwandaa hinirraanfannee ture.Weellisaa Jaamboo Jootee waggaa torba dura ''Beelbaa' jechuun sirba barreesee bara Gadaa Beelbaa kanatti xumuree argaa dhageettii uummataan gaheera.
Gadaan Beelbaa barana Birmajjii irraa baallii fudhateera. Barri Gadaa Beelbaa bara quufaa, bara jijjirraan mootummaa itti gaggeefamu jedhama.
Maarree Jaamboo Jootees Beelbaa sirba jedhuu xumuree uummatan gaheera. Abdii kutannaa keessa taa'uun waan bara quufaa, jijjirraafi mo'ichaa arge fakkaata. Yeroon sun bara abdii kutannaa guddaan jiru fi sirni bulchiinsaa mijataan dhibuun namootni hedduun biyya irraa baqatanii turanidha. Dukkana keessa taa'anii ifa arguu, beela keessatti waa'ee quufaa haasa'uun ulfaatus Jaamboon waa jedheera. Jaamboonis haaluma akkasii keessa taa'uun ture kan walaloo sirba haaraa hojjechaa turee 'Beelbaa' barreesse.
Waan baay'ee dhabnee ture, amma argannee harkatti galfachuu baannus abdii gaarii qabna jedha Jaamboon. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Image copyright You tube Goodayyaa suuraa Weellisaa Jaamboo Jootee Weellisaa Jaamboo Jootee waggaa torba dura ''Beelbaa' jechuun sirba barreesee bara Gadaa Beelbaa kanatti xumuree argaa dhageettii uummataan gaheera.
Keeniyaa magaalaa Naayiroobii hojiif deemee mudannoo guddaaf saaxilamuu dubbate.
Dhiyeenya kana balaan konkolaataa salphaan weellisaa Jaamboo Jootee irra gahee ture. Yaalii argachuun amma mana isaa keessatti bayyaannachaa jiraachuus himeera. Jaamboon ji'oota shanii gidduutti sirba albemii guutuu hojjechaa jiru akka gadhiisu dubbateera. Abbaan Afaan Oromoo eenyu?
Mata dureewwan walitti dhiyaatan Uummata Oromoo Aartii Muuziqaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada. Badhaasotan argadhe keessaa inni kun adda - Alii Birraa. Isin hin darbiin.Friday, April 10, About us Contact us Sirboota Ispoortii Kitaaba.
Awash Post Oromo News.
Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera. Filannoof baatii 9tu hafe. Finfinneen weerara lafaa qindaaye jalatti kufte. Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye. Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona…. Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Qabxiilee saglan kanniin….
All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte. Oromiyaa keessatti barnoonni sad. All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman. Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii…. All Aadaa Bashannana Viidiyoo. Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf.
Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. All Atleetiksii Kubbaa miilaa. Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate. Home Sirboota Oromoo Haarawa. Sirboota Oromoo Haarawa! New oromo music by Tafarii Mokonnon "Ittu qabgssoo cimsaa.
New afan oromo music Shimele too Asefa chala. Ka'i Ni Kaana'i!! Kamaal Ibraahim - Dubbii Lafaa Caalaa Bultumee Qeerransoo - "Maaster Pilaanii".
sirboota afaan oromoo haraa
New oromo music Aliyi Sabit - jabadhu qerroo. Shukri Jamal - Dinne! Nafiisaa Abdulhaakiim " Mimmi'eessituu Jaalalaa " new Oromo music video Gaaddisee Shamsaddiin Nama Gaddisiissaa.
Cookies Policy. Necessary Always Enabled.Sababni gara Noorweey deemusaas waan maatiin isaa baqattummaan biyya sana keessa jiraniif, isaan waliin jiraachuuf achi dhaqusaa BBC'tti himeera. Ijoollummaadhaa qabee fedhii muuziqaa akka qabu kan dubbatu Guutuun, carraa muuziqaa hojjechuu kan argate garuu biyya Noorweey erga dhufeen boodadha. Kanumaanis baandii aadaa garagaraa walitti dabaluun muuziqaa hojjetu, Fargespill jedhamu keessa miseensa tahe. Haaluma kanaanis sirboota Afaan Oromoo fi sirboota biyyoota dhihaa walitti makuun waltajjiirratti dhiyeessuu jalqabe.
Kanumaanis carraa mootii fi giiftii Noorweey biratti affeerameera,'' jechuunis nutti himeera. Guutuun sirba Oromiyaa bal'oo jedhu kana miseensota baandichaa Afaan Oromoo hin beekne leenjisuun, sirba kana waltajjii garagaraa irratti dhiheessuu danda'eera. Bara keessa mana mootii Norweeyitti sirba Afaan Oromoo akkan sirbuuf kan affeerame Guutuun, ''Giiftiin biyyattii [Sooniyaanis] Afaan maalii akka tahee na gaafatanii Afaan Oromoo akka tahees itti himeera,'' jedha.
Sirboota Afaan Oromoo namoota biyya biraa afaanicha hinbeekne barsiisuun ni ulfaata kan jedhu Guutuun, baay'ee ulfaataa tahuus barsiisuun ni danda'ama jedha.
Kana malees aartiin Afaan Oromoo miidhamaa ture kan jedhu Guutuun, akkasitti sadarakaa olaanaatti hojjachuu danda'uun koo hedduu na gammachiisa,'' jedheera. Rakkoon inni guddaan biyya hambaatti gama muuziqaatiin artiistii tokko mudatu, kaka'umsa [inspiration] akka tahe dubbata. Kanas wayita ibsu, ''Osoo Oromiyaa jiraattee, manaa baatee wayita qilleensa biyyaa hafuura fudhattu, waan isaan dhaggeeffatan beekta.
Biyya hambaatti fooliin ati fudhattu, foolii biraati. Waan gurri kees dhaggeeffatu waan addaati. Osoo hin jaallatiin handhuura irraa fagaachaa deemta,'' jedha. Danqaan inni biraan ammoo, ''Afaan Oromoo guyya guyyaan itti hin fayyadamnu waan taheef, walaloo sirnaan barreessunillee ni ulfaata,'' jedheera.
Miseensoota Baandii Gadaa durii keessaa Tottoobaa Margoo fi Hirphaa Gaanfuree, akkasumas miseensota haaraa dabaluun baandii kana deebisanii ijaaruuf hojjachaa akka jiranis Guutuun BBCtti himeera.
Muuziqaan Oromoo 'oota keessa ture sadarkaan isaa olaanaa ture kan jedhu Guutuun, artistoonni wayita sana turan biyyaa baqatanii waan bahaniif, sadarkaan muuziqaa Afaan Oromoos akka miidhamu godhee jira jedha. Kaayyoon baandii kanaas, aartiin Oromoo lammata deebi'ee akka inni dhalatu gargaaruufis akka ta'e dubbateera.
Baandiin kanaanis biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa naanna'uun muuziqaa dhiyeessuuf akka kaayyeeffatanis Guutuun nutti himeera. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Guutuu Abarraa: Baandii Gadaa deebisnee ijaaruuf jirra 5 Elba Erga waggaa saddeetti as ammoo biyya Awurooppaa Noorweey, Magaalaa Bergen keessa jiraata. Maatii Moototaa Noorweey Bara keessa mana mootii Norweeyitti sirba Afaan Oromoo akkan sirbuuf kan affeerame Guutuun, ''Giiftiin biyyattii [Sooniyaanis] Afaan maalii akka tahee na gaafatanii Afaan Oromoo akka tahees itti himeera,'' jedha.
Qophiin kunis TV biyya Noorweey keessa argamanitti tamsa'eera. Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Gammadoo Jamaal: Biyya hambaatti fiilmii Afaan Oromoo.
Viidiyoo Biyya kanatti wanti salphaadha jedhee yaadu, baqataa jedhamee waamamuu qofa. Isin hin darbiin.Walaloofi yeedaloo isaarraa kaasee abbaan sirbichaa ammoo Keekiyyaa Badhaadhaati.
Keekiyyaatiif kun sirba jalqabaa miti. Kanaan durallee sirboota seenaa ciccimoo himan, qalbii namaa seenan biroo ni qaba. Sirboota kanaan dura Keekiyyaan ittiin beekamu keessaa ' Warri kun…, Warra kam.
Sirboonni Keekiyyaa bilchina walaloo seenaa himu qofaan miti kan beekaman, dhimma yeroo waliin deemuufi wayitaawaa ta'e kaasuun dhaggeeffattoota isaa biratti addatti jaallatama. Filmaata na haa ga'uu Itti fufuun walaloo sirba isaa kanaan dur-deemtota hawaasaafis ergaa himaa waan Uumaattillee qalbii deebifachuu gorsa Keekiyyaan. Biyyaaf naasuu labse e… jechuun sirba daqiiqaa ja'aa kanaan dhaggeeffatoota isaa miiraan waadaa galchisiisa.
Keekiyyaan akka sirba isaa kanaan ergaa dabarsetti Oromoon Ayyaantummaasaa yoo deebifate waan hin moone hin qabaatu. Ofii Ayyaantummaan maali? Oromoon akkamitti Ayyaantummaadhaan moo'ata? Keekiyyaa: Ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha. Ayyaantummaan kuni humna, waardiyyaa tumsa siif ta'ee kan sigargaarudha. Fakkeenyaaf, nama tokkoon yoo wallolte nama sana qaamaan dhaqxee walreebuu keetiin dura ayyaana keessan lamaantu wallola.
Nama ayyaannisaa injifatee sanatu gaafa qaaman jarri wallolanis injifata. Ayyaanni kee gaafa si gatee deemus abbuma argetu sitti taphata. Ayyaantummaa kee yoo kunuunfachuu baatte si gatee deema. BBC: Sirbikee kun 'Ayyaantummaan moona' jedha.
Oromoon akkamitti ayyaantummaadhaan moo'uu kan danda'u? Keekiyyaa: Ayyaanni tokkoon tokkoo keenyaa walitti dhufee ayyaana Oromoo ta'a.Sirbi qeenxee mata duree 'Jirra' jedhuun weellisaa Haacaaluu Hundeessaan tibbana gadi dhiise gamanumaan jaalatamumma guddaa horateera.
Haacaaluun walleewwan Afaan Oromoo ciigoon masakaman, qor-qalbii fi yaada ummataa calaqqisiisan aartiin miidhagsee gurra uummataan gahuun beekkamtii guddaa horate. Weellisaa Daawitee Makonnin fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta'e amana. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbileefi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera.
Naannoo manneen barnootaafi gumiiwwan keessatti sirbuu itti fufe. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kana hin jaalanne. Addee Guddattuu Horaan garuu gammadoo turan.
Sirbituun mana hin godhattu alalee taati,'' jechuu isaanii har'as yaadata. Weellisaa Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanti isa mudate jireenya isaa jijjiireera. Umurii waggaa 17'n, A. I bara hanga 'tti karchallee Amboo keessa ture. Shakkamee akka hidhame dubbata. Kan biraa wanti haaraa hin jiru'' jedha. Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufees torban tokko Ma'ikalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan, ''Jabaadhu gurbaa, hidhaan qoraasuma dhiiraati!
Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaare. Hacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Kanan bare mana hidhaa sana keessatti.
sirboota afaan oromo
Albama jalqabaa keessaa sirboota sagal achittin fixee bahe. Walaloos yeedaloos barreessee. Manni hidhaa Amboo Haacaaluuf mana barumsaa ture.Hattuun weellisaa sirba beekamaa Desipasiitoo, Daaddi Yankee of fakkeessuun, kutaa isa hoteelaa Ispeen seenee faaya doolaarii miliyoona 2.
Akka himaniiti, hattuun sun Daaddii Yankee of fakkeessee, hojjattoota hooteelaa Valensiyaati bilbile, kutaa naa banaa jedh. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Weellisaa sirba beekamaa Desipaasiitoo nama isa fakkaatutti hate 10 Hagayya Daaddi Yankee ka sirbi isa Desipasiito addunyaa dhaqqabe, daawwana Awuroppaa jira. Poolisiin qorannaa hanna suni irra jira jedh. Har'iti maro qaratimiti ka weellisa hatan.
Weellistuun Masrii muuza nyaachaa sirbite hidhamte 'Baandii Gadaa deebisnee ijaaruuf jirra' Desipasiitoon sirba ilaalcha baayyee argate, Youtube irratti ilaalcha biliyoona 5 olii qaba. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Awuroppaa Yuuroozoon Ispeen Muuziqaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata.
Weellistuun biyya Masrii viidiyoo muuziqaa 'miira saalaa dadammaqsu' hojjechuu ishiif hidhamte. Caalaa Bultumee: 'Oromoof nan wareegama malee Oromoo hin ajjeesu'.
Guutuu Abarraa: Baandii Gadaa deebisnee ijaaruuf jirra. Isin hin darbiin.
Daygo boy fet laylizzy 2020
Vampire requiem disciplines list
Spdlog stack trace
Challenges of being a kdf cadet in kenya
Ozone and dmso
Dirilis ertugrul season 5 episode 5 urdu facebook
thoughts on “Sirba haaraa 2018”
Copyright © 2021 Sirba haaraa 2018 — Ascension WordPress theme by GoDaddy